Large Format Printer, Embroidery Machine, Pcha Plotter - YINGHE
Nnukwu Nbipụta Akwụkwọ
Ihe nbipu ala nke Eco
Mgbaze ihe mgbaze
UV flatbed ebi
Sublimation ngwa nbipute
Flag ebi akwụkwọ igwe
Igwe eji arụ ọrụ n'ụlọ
1 isi mkpuchi igwe
Ọ bụ 12
2 isi embroidery igwe
Igwe nkpuchi isi nke 4
Igwe eji edozi isi 6
Desktop ọnwụ plotter
S-egbu egbu plotter
Ngwe ọnwụ plotter
Sublimation Okpomọkụ Press
Ugboro abụọ ụgbọ okpomọkụ pịa igwe
Cap okpomọkụ pịa igwe
Mug okpomọkụ pịa igwe
Efere okpomọkụ pịa igwe
5 na 1 igwe igwe oku oku
3D Sublimation agụụ Okpomọkụ Press Machine
4 agba na 4 ojii ihuenyo ebi akwụkwọ igwe
4 agba na 4 ojii vernier ihuenyo ebi akwụkwọ igwe
Igwe na-ekpo ọkụ ma na-ajụ oyi
Obere laminating igwe
YH360 laminating igwe
YH460 laminating igwe
YH650 laminating igwe
Oyi laminating na ọnwụ igwe
CO2 Laser osise na cutter
Eriri laser osise na cutter
Kaadị na igwe ihe onyinye
Flatbed ọkụ foil igwe
PVC kaadị ngwa nbipute
Igwe embossing igwe
Igwe ndị ọzọ
Onye na-ekpo ọkụ welder
Foto akwụkwọ ntuziaka na-eme igwe
Igwe na-eme album
Laser Engrver na cutter
Sublimation Okpomọkụ Press Machine
Office & mbukota Machine
YINGHE akụkọ ihe mere eme na azụmahịa mode: YINGHE eletriki ụlọ CO., LTD bụ nanị anụ ụlọ yinye ụlọ ahịa nke nwere a zuru ụwa ọnụ esenidụt obodo nkwakọba ọrụ cross-ókè-ala e-azụmahịa n'elu ikpo okwu ụlọ ọrụ. anyị ụlọ ọrụ e guzobere na 2002, mgbe afọ nke mmepe, YINGHE aghọwo a maara nke ọma anụ ụlọ na ndị mba ọzọ elu-tech akụrụngwa nke oge a na enterprise, ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ, ngwaahịa na ọrụ na mba bụ nke abụọ. A na-ere ngwaahịa anyị nke ọma karịa mba 200 na mpaghara ụwa.
Olee otú ịnọgide na-enwe na ngwa nbipute isi ezi uche?
Dị ka isi akụrụngwa nke inkjet ebi akwụkwọ igwe, kwụsie ike nke ebipụta isi udiozi na-ekpebi àgwà nke igwe. Mgbe ego a kapịrị ọnụ nke isi ebipụta dịtụ elu, otu esi agbatị ndụ ọrụ nke isi a na-ebipụta, belata ọnụego nnọchi na ogo akwa, ma jigide isi mbipụta nke ọma.
Kedu ihe dị iche na etiti mmiri ...
Mmanụ dabeere ink bụ itughari pigmenti na mmanụ, dị ka ịnweta mmanụ, ihe oriri na mmanụ, wdg Ink-agbaso na-ajụ site mmanụ penetration na evaporation na-ebi akwụkwọ na-ajụ; ink dee mmiri na-eji mmiri dị ka dispersion ajụ, na ink bụ na-ebi akwụkwọ na-ajụ The ink na-agbakwunyere nke ...
Anọ uru nke piezoelectric inkjet p ...
Dị ka anyị niile maara, teknụzụ ikuku na-ekpo ọkụ na-achịkwa ahịa ahịa nnukwu inkjet ọtụtụ afọ. N'ezie, teknụzụ pejielectric inkjet ewepụtala mgbanwe na teknụzụ inkjet. E tinyela ya na ndị nbipute desktọọpụ ogologo oge. Na mmelite na ntozu oke nke ...
No.8 ala ụzọ, Baimibu Xiushui Industrial Park, 106 ala ụzọ, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, China.